Dayactirka guryaha Dadweynaha - Tenants Victoria
Wakhti laga bilaabo ilaa wakhti waxaa loo baahan yahay in dayactir lagu sameeyo gurigaaga ijaarka ah.
Sharciga kireysigu wuxuu ka doonayaa dhammaan mulkiilayaasha Victoria, oo ay ku jiraan Director of Housing,* inay ku ilaaliyaan guryahooda ijaarka loogu jiro inay dayactir wanaagsan ku sameeyaan.
Haddii wax laga doonayo in laga dayactiro gurigaaga waa inaad kala xiriirtaa Xarunta Wicitaanka Dayactirka sida ugu dhakhsaha badan 13 11 72 .
Waxaad Wici kartaa Xarunta Wicitaanka Dayactirka 24kii saac maalintii, 7 maalmood toddobaadkii (wac oo kaliya saacadaha shaqada ka dib haddii ay tahay dayactir degdeg ah).
U sheeg luuqadaad ku hadashid Xarunta Wicitaankuna waxay kuu qabaneysaa turjumaan.
Markaad wacdo Xarunta Wicitaanka Turjumaanka waa muhiim inaad u sheegto.
Magacaaga iyo lambarka taleefankaaga
Waxa dhibku yahay (waxaan shaqeynaynin ama u baahan dayactir)
U sharax dhibka si faahfaahsan. Si koobanna u sheeg. Tusaasle haddii tuumbada biyo ka da’ayaan, u sheeg qofka shaqaalaha aha inay tahay tuubada biyaha kulul ama qabow. Tusaale kale ahaan, haddii cunto kariyahaagu jaban yahay u sheeg shaqaalaha in cunto kariyuhu yahay gaas ama koronto, shayga jaban iwm.
Had iyo jeer weydii Xarunta Wicitaanka Scheduled Contract Number (SC Order). Kani waa diiwaangelinta wicitaankaaga.
Dayactirku waa noocee?
Dayactirka waxaa loo kala saari karaa mid degdeg ah, mid mudnaan la siinayo ama dayactirka aan degdega ahayn.
Dayactirka degdega ah
Kuwani waa dayactir u baahan in la sameeyo 24 saacadood gudahood
Adeega biyaha oo dilaaca
Musqul jabtay ama xidhantay
Saqafka oo si khatar ah u darooraya
Gaaska oo meel ka daadanaya
Cilad koronto oo khatar ah
Waxyeelo dab ama duufaan darran
Xoogga biyaha oo jaba ama socon waaya, biyaha kulul, cunto kariyaha, kululeeyaha ama adeega dhardhaqida ee uu bixiyey Director of Housing
Cilada darran ee jaranjarada ama wiishka
Waxyeelada ama cilad ka dhigeysa guriga mid aan ammaan ahayn (oo ay ku jiraan waxyeelada alaarmiga dabka ama ciladooda)
Dayactirka mudnaanta la siinayo
Dayactiradan waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo 7 maalmood gudahood.
Dayactirada mudnaanta leh waa dayactirka darran laakiinse aan u lahayn khatar degdeg ah caafimaadka iyo ammaanka. Tusaale, tuuba da’aysa
Haddii tuubadu ay daadineyso biyo fara badan ka dib waxaa loo ogolaanayaa inay tahay dayactir degdeg ah. Markaad la hadasho Xarunta Wicitaanka Dayactirka waxaad u baahan tahay inaad si kooban u hadasho oo aad u sheegto inta biyo ah ee daadaneysa.
Si wanaagsan oo lagu cabiro inta biyo ah ee daadanaysa waxaa weeye waxaad hoos dhigtaa biyaha daadanaya maqle una sheeg Xarunta Wicitaanka inta jeer ee la madhiyey maqlahaas ilaa wakhti (tusaale 1 saac).
Dayactirada aan degdega ahayn
Dayactiradan waxay u baahan yihiin in la sameeyo 14 maalmood gudahood.
Waa dayactiro aan loo tixgelineynin degdeg ama kuwo mudnaan la siiyo. Tusaalayaasha waxaa ka mid ah armaajada jikada oo waxyeelo gaadheen, derbiga oo god leh, daaha daaqada oo jaban ama xadhiga dharka oo waxyeelo gaareen.
Dayactirka marka la sameeyo
Isla markaad la xiriirto Xarunta Wicitaanka Dayactirka waxay soo ballaminayaan qandaraasle inuu yimaado gurigaaga si uu u xaliyo dhibka.
Haddii ay tahay dayactir degdeg ah qandaraasluhu waa inuu ku yimaadaa 24 saac gudahood.
Haddii uu yahay mid mudnaan la siinayo ama dayactir aan degdeg ahayn ka dib qandaraasluhu wuu kula soo xiriirayaa si kuugu sameeyo wakhti haboon oo uu yimaado gurigaaga.
Qandaraasluhu waa inuu ku tusaa aqoonsi ka hor intuusan soo gelin.
Haddii aadan guriga joogin qandaraasluhu wuxuu kaaga tegayaa kaadhka wicitaanka. Tan waxaa ka mid ah taariikhda iyo wakhtiga ay ku soo waceen iyo magacooda iyo taleefan lambarka.
Uma baahnid inaad wacdo qandaraaslaha. Ka wac Xarunta Wicitaanka 13 11 72 una sheeg iyaga waxa kaadhka ku qoran. Ka dib waxay wacayaan qandaraaslaha waxayna kuu sameynayaan wakhti haboon.
Ka waran haddii aan dayactirka la sameyn?
Waxaad wici kartaa Xarunta Wicitaanka mar labaad oo aad u sheegi kartaa inaan shaqada la qaban. Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa Tenants Union/Tenants Victoria wixii tallo ah 1800 068 860.
Haddii ay tahay dayactir degdeg ah waxaad ka dalban kartaa Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) amar ah in la sameeyo dayactirka. Wixii macluumaad dheeraad ah la xiriir Tenants Union/Tenants Victoria ama eeg warqada xaqiiqda ee Victorian Civil & Administrative Tribunal.
Haddii uu yahay dayactir aan degdeg ahayn, waa inaad u qortaa warqad Consumer Affairs Victoria (CAV) adoo ka codsanaya inay sameeyaan kormeerid. Kormeeraha Arimaha Macaamiilka ayaa soo booqanaya gurigaaga haddii loo baahan yahay dayactir, kormeeruhu wuxuu la xiriirayaa Director of Housing si uu u habeeyo dayactirka in lagu sameeyo wakhti go’an.
Haddii aan weli dayactirka la sameyn, kormeeraha Arimaha Macaamiilku ayaa kuu soo diri doona nuqulka warbixinta dayactirkooda. Ka dib waxaad uga dalban kartaa Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) amar ah in dayactirka la sameeyo. Tenants Union/Tenants Victoria ayaa kaa caawineysa inaad dalbato VCAT oo kaa caawineysa inaad u diraargarowdo dhageysiga maxkamada.
Waxaad xaq u leedahay inaad cabbato! Waa inaad qaadaa tallaabooyinka kore ama aad cabasho sameysaa haddii aan dayactirka la sameyn wakhtiga loogu talagalay, shaqada tahay mid tayadeedu xun tahay ama haddii qandaraasluhu uu u dhaqmay si edeb darran ama gaf leh.
Isla marka shaqada la dhammeystiro waxaa lagu weydiin doona inaad saxiixdo dalabka shaqo. (Ha saxiixin dalab shaqo oo bannaan).
Public housing repairs | Somali | June 2012